Yini i-Glycine Propionyl-L-Carnitine (GPLC)
IGlycine Propionyl-L-Carnitine kubhekiswa ohlotsheni oluboshwe ngamangqamuzana lwepropionyl-L-carnitine kanye ne-amino acid glycine. Ihlukaniswa emndenini ngokufanayo neCarnitine futhi ibalulekile ekusungulweni kweCreineine. I-Glycine Propionyl-L-Carnitine (GPLC) isebenza njenge-antioxidant, futhi iba nomphumela wokulwa okunamandla nama-radicals wamahhala kanye nokuvikela i-lipid peroxidation.
Ngaphezu kwalokho, isiza ekwakheni amandla ngokunika amandla ukudluliswa kwama-fatty chain acid ku-mitochondria. Kuyasiza ekuqedeni izinto ezilahlwayo - izinsiza ze-carnitine ekuvikeleni umzimba ezifweni zenhliziyo nasesifo sikashukela. I-GPLC ibhekwa njengomsebenzi wokukhuthaza ukukhula kwemisipha futhi inyuse ukuzivocavoca ukusebenza. Isengezo singathathwa ndawonye nezinye izithasiselo, ngokwesibonelo, i-propionyl-l-carnitine l-arginine ne-niacin, esiza ekwenzeni ngcono ukungasebenzi kahle kwe-erectile (ED) emadodeni. Kodwa-ke, thola isilinganiso esifanele kudokotela wakho ukugwema ukweqisa, okungaholela emiphumeleni emibi kakhulu.
Izinhlobo zePropionyl-l-carnitine zifaka; I-3-propanoyloxy-4- (trimethylazaniumyl) butanoate, Glycine Propionyl-L-Carnitine (423152-20-9), I-L-carnitine propionyl, i-PLC, i-LPC, ne-Glycine propionyl-L-Carnitine Hydrochloride. The isengezo sokudla ithengiswa ngaphansi kwamagama omkhiqizo ahlukahlukene ngokuya ngendawo yakho. Kodwa-ke, lokho akufanele kube yinkinga yakho; Izindondo kufanele zikwazi ukuqondisa ukuyithenga.
Lesi sithasiselo siyatholakala ezitolo ezahlukahlukene eziku-inthanethi lapho ungangenisa futhi ngaphandle kwezinkinga. Isibonelo, i-propionyl-l-carnitine Walmart iletha ngesikhathi esifushane kakhulu. Akunandaba ukuthi ukuphi, sebenzisa i-smartphone yakho noma ikhompyutha bese wenza i-propionyl-l-carnitine Walmart oda namuhla. Kuyalulekwa ukuthi wenze ucwaningo lwakho kubathengisi be-glycine propionyl ngaphambi kokuthatha isinqumo sakho sokugcina. Funda izibuyekezo ze-propionyl-l-carnitine Reddit ukuthola ukubuka konke kokuthi abathengisi noma isengezo sisebenza kanjani. Amakhasimende ahlala eveza umbono wawo othembekile mayelana nesengezo, esingakusiza ekukhetheni umthengisi ohamba phambili. Udokotela wakho futhi uzoba ngumuntu ongcono kakhulu wokukuqondisa ukuthi ungakuthola kuphi futhi kanjani isengezo sekhwalithi esizokusiza ukuthi ufinyelele imigomo yakho.
I-GPCL yaziwa njenge-Carnitine's propionyl ester equkethe enye ingxenye ye-glycine. Ngenxa yama-enzyme ama-tishu esterase, i-Glycine Propionyl-L-Carnitine testosterone idinga ukudlala indima yesidakamizwa futhi iphumele ku-glycine, Carnitine, kanye ne-propionic acid emzimbeni womuntu. I-Glycine Propionyl-L-Carnitine ne-L-Carnitine ziyehluka ngobukhulu obuthile. Zombili ziyasiza ekukhiqizeni amandla futhi ukukhula kwemisipha. Ukuhlolwa kwe-Glycine propionyl-L-carnitine kusiza nomzimba wakho ukuthi ululame ezifweni ezifana nesifo senhliziyo.
Ngokuphambene nalokho, i-L-Carnitine ijwayele ukusetshenziswa ekwelapheni ubuhlungu bomlenze kanye nezifo zenhliziyo. I-L-Carnitine ngamakhemikhali ngenkathi i-Glycine Propionyl-L-Carnitine (423152-20-9) ihlolwa ngamangqamuzana. Ngamafuphi, uGlycine Propionyl-L-Carnitine testosterone ulwa nezifo ngenkathi iL-Carnitine iphilisa izifo.
Imiphumela ye-Glycine Propionyl-L-Carnitine
Okulandelayo kukhona glycine propionyl L izinzuzo ze-carnitine:
Ukuhlinzekwa kwamandla. I-Propionyl-L-carnitine isiza umzimba ukuthi ukhiqize amandla. Kubalulekile ekusebenzeni kahle kwenhliziyo, ukuhamba kwemisipha, phakathi kwezinye izinqubo zomzimba. Ibhekene nokuhamba kwegazi okuphezulu emzimbeni.
Ukwelapha amazinga aphansi e-testosterone. Ukuguga kungaholela ku-testosterone ephansi emadodeni. I-Propionyl-L-carnitine ifakwe i-acetyl-L-carnitine izinyanga eziyisithupha iyikhambi eliphansi ukusebenza kocansi, ukudangala, kanye nokukhathala emadodeni amadala. Le nhlanganisela isebenza njenge-testosterone yokwenziwa.
Angina noma izinhlungu esifubeni. Ukuthatha i-propionyl-L-carnitine ngomlomo kusiza abantu abane-angina ukuhamba phambili. Kwabanye abantu, kunganciphisa imvamisa yobuhlungu besifuba.
Iphatha izifo zenhliziyo ezingama-ischemic. Uma ufaka i-propionyl-L-carnitine emithanjeni, isiza ipompo yenhliziyo kangcono kubantu abanesifo senhliziyo.
Ukwehluleka kwenhliziyo okudala kakhulu (CHF). I-Propionyl-L-carnitine iyi-prodrug esebenzayo yabantu abane-CHF elingatheni noma emnene. Kuthuthukisa ukuthi izinhliziyo zabo zisebenza kanjani futhi zibasize ukuba bahambe amabanga amade.
I-Glycine propionyl l carnitine nokungasebenzi kwe-erectile. Ngokwanda ama-testosterone ama-testosterone emzimbeni wakho, lokhu kuhlanganiswa kuxazulula ngokuzenzakalelayo izinkinga ze-erectile kanye nokukhulisa i-sex drive emadodeni.
I-Propionyl-L-carnitine ivame ukuxutshwa neViagra (sildenafil) ukuthola imiphumela engcono emadodeni ane-ED nesifo sikashukela. Ngaphezu kwalokho, izithako ezithile eziqukethe i-propionyl-L-carnitine kungenzeka zikhuphule ukusebenza kocansi.
Ukugula kwe-vasipheral vascular (ukusakazeka okuhle). Izifo zekhompiyutha zingadala ukuvuvukala kwemithambo noma izinhlungu emlenzeni ngenkathi uhamba; umbandela obizwa ngokuthi ukulamana ngezikhathi ezithile. Imijovo yenaliti noma ukumunzwa okuqondile kwePropionyl-L-carnitine kusiza abantu ababhekene nobuhlungu bomlenze ukuhamba amabanga amade.
Isifo sikaPeyronie (siqinisa izicubu zomthondo)Isidakamizwa esibizwa ngokuthi i-verapamil, kanye nepropionyl-L-carnitine sithuthukisa ukusebenza kwezocansi, sivimbela ukuwohloka kwalesi simo. Inhlanganisela ingathathwa ngomlomo noma ngemijovo. Isifo sikaPeyronie singadinga ukuhlinzwa uma singekho. Ngakho-ke, iPropionyl-L-Carnitine iyasiza.
Isifo samathumbu (ulitisative colitis). I-Propionyl-L-carnitine ilusizo ekunciphiseni izimpawu ezigulini ezine-ulcerative colitis nazo eziphansi kwemithi ethile. Kungasusa izimpawu.
IGlycine Propionyl-L-Carnitine Ucwaningo Nemiphumela
Isifo sikaCrohn (isifo samathumbu)Ucwaningo lokuqala lubonisa ukuthi ukusebenzisa i-propionyl-L-carnitine kunciphisa kakhulu izimpawu ezigulini ezinesifo sikaCrohn.
Ukhathala okungapheli syndrome (CFS).Ucwaningo lukhombisa ukuthi i-propionyl-L-carnitine ingathuthukisa ukukhathala okujwayelekile kweziguli ze-CFS. Kuyathakazelisa ukuthi uma i-acetyl-L-carnitine ixubene ne-propionyl-L-carnitine, umphumela awusebenzi kangako kunokusebenzisa noma yini ukongeza ngokwahlukana.
Ikhono lokuzivocavoca. Imbiwa izokhulisa amandla e-cycling, amandla okubekezelela ukuzivocavoca okunzima komzimba. Noma kunjalo, thatha okufanele umthamo we-glycine propionyl-l-carnitine. Ukweqa lokhu okuwedlule kungaholela emiphumeleni emibi ye-glycine propionyl-l-carnitine HCl, okungabiza kakhulu ukuhlehlisa.
Yikuphi Ukudla Okunothile ku-Glycine Propionyl-L-Carnitine?
I-Glycine propionyl-l-carnitine itholakala ikakhulu ku:
Imifino enamahlamvu amnyama,
Ungayithatha kanjani iGlycine Propionyl-L-Carnitine
I-Propionyl-L-Carnitine iyathengiswa njengesengezo. Ungayithola esitolo sakho sasekhaya noma ekhemisi. Abasubathi bangazuza kakhulu ekuwuthatheleni ngoba kusiza umzimba ukuba ulondoloze ukusebenza kahle kwemisipha futhi kuqinise ukugeleza kwamandla eziseleni zamaseli. Nazi i-Glycine Propionyl-L-Carnitine enconyiwe423152-20-9) umthamo osekelwa ucwaningo lwesayensi.
Ukwelapha ukuphazamiseka kwemithambo yegazi: Thatha i-500-2000 mg propionyl-L-carnitine amahlandla amabili ngosuku.
Ukulungisa i-CHF (ukuhluleka kwenhliziyo okwejwayelekile), ubuhlungu be-angina noma esifubeni; Thatha i-500 mg propionyl-L-carnitine kathathu ngosuku.
Ukuthuthukisa i-testosterone emadodeni asebekhulile: Thatha amagremu amabili we-propionyl-L-carnitine kanye namagremu amabili we-acetyl-L-carnitine nsuku zonke.
I-Glycine propionyl l carnitine nokungasebenzi kwe-erectile: Thatha amagremu ama-2 we-propionyl-L-carnitine nsuku zonke exutshwe nama-50 mg we inikezwe kabili ngesonto. Inhlanganisela ethile ye-propionyl-L-carnitine l-arginine ne niacin izothuthukisa idrayivu yakho yocansi. Kodwa-ke, umthamo kufanele ube ngu-250mg fir propionyl-L-carnitine no-20mg we-niacin. Ngakolunye uhlangothi, ungathatha futhi isengezo nge-arginine 2500 mg ngosuku.
Ngesifo sikaPeyronie: 2 amagremu wepropionyl-L-carnitine nsuku zonke ngokuhlangana nemijovo yomuthi obizwa nge-verapamil.
Kwi-colitis ulcerative: i-gramu eyi-0.5-1 ye-propionyl-L-carnitine kabili nsuku zonke.
Ungahlanganisa futhi i-l -carnitine, ne-Cialis, kepha uthole umthamo ofanele kusuka kuchwepheshe wezokwelapha ngolwazi olungcono.
Ngezifo zenhliziyo nokuphazamiseka kwemithambo yegazi: Ochwepheshe bezempilo baphatha imijovo ye-propionyl-L-carnitine, inqubo ebizwa ngokuthi i-IV.
Imiphumela emibi ye-Glycine Propionyl-L-Carnitine nokuphepha
I-Propionyl-L-carnitine iphephe kakhulu kubantu abaningi uma ithathwa ngomlomo noma ilimale emithanjeni ngudokotela onguchwepheshe. Kungase kudale isifo sohudo, ukukhuphuka kwesisu, izinhlungu zesisu, ukugabha, izinhlungu emuva, nezifo zesifuba. Ngaphezu kwalokho, kungadala iphunga elibi lokuphefumula, umchamo, noma ukujuluka.
Abasebenzisi abakhulelwe nabancelisa amabele: Kuncane okwaziwayo ngokusetshenziswa kwe-propionyl-L-carnitine for lactating or momanthulelwe. Qhubeka ngokuqapha futhi uvikele ukusetshenziswa.
"I-thyroid engasebenzi kahle" (i-hypothyroidism): i-propionyl-L-carnitine ingenza i-hypothyroidism ibe yimbi kakhulu noma ukwelashwa kwe-hormone yegilo kungasebenzi kahle. Amakhemikhali akulesi sidakamizwa, okungukuthi, i-L-carnitine, aphazamisa i-hormone yegilo. Kungcono ukugwema i-propionyl-L-carnitine uma une-hypothyroidism.
Ukuxhamazela: Abantu abambalwa abanomlando wokuxhuxwa babike ukwanda kobunzima kanye nenani lokuthathwa kwengozi ngemuva kokusebenzisa iL-carnitine. Kukhona amathuba amakhulu wokuthi lokhu kungenzeka nge-propionyl-L-carnitine njengoba inamakhemikhali afanayo.
Ukusebenzisana kwe-GPLC neminye imithi
Ukuze ube sohlangothini oluphephile, xhumana nodokotela wakho ngaphambi kokuqala ukuthatha i-GPLC. Uma kwenzeka uthatha i-Acenocoumarol (Sintrom), kufanele futhi ubandakanye nodokotela wakho ngoba kungahle kube nokusebenzisana okuthambile ngoba kungahle kwehlise ukubekeka kwegazi ngenkathi i-GPLC ingenyusa imiphumela ye-Sintrom.
IWarfarin (Coumadin) ngomunye umuthi ongawuthatha kanye nesengezo se-glycine propionyl-l-carnitine. Kodwa-ke, qiniseka njalo ukuthi uthola isilinganiso esifanele kumuthi wakho. Imithamo ingahluka ngokuya ngesimo eselashwa.
Ungathenga kuphi isengezo sePropionyl-L-Carnitine
Njenganoma yimuphi omunye umkhiqizo wezokwelapha, ungathenga izengezo ze-glycine Propionyl-L-Carnitine kusuka kumapulatifomu e-inthanethi ahlukahlukene noma kuma-lab ezokwelapha ngokomzimba. Kodwa-ke, inselelo iza ekukhetheni umthengisi ofanele uzokunikeza ngemikhiqizo esezingeni. Kuningi Abathengisi be-glycine Propionyl-l-Carnitine powder, kokubili ngokomzimba naku-inthanethi. Kodwa-ke, lokho akumele kukwethuse, okudingayo ukuthatha isikhathi sakho wenze ucwaningo kubathengisi be-powder abatholakala nge-glycine Propionyl-l-Carnitine.
Unenkululeko yokuthenga i-glycine Propionyl l-Carnitine powder ngobuningi noma nje eyanele ukusetshenziswa kwakho. Khumbula, ukuthola njalo umthamo olungile kochwepheshe bezokwelapha ukuze ujabulele izinzuzo eziphezulu ze-glycine propionyl-L-carnitine. Cabanga ukudlula ku-propionyl-l-carnitine Redditreviews ukuthola ukubuka konke kokuhlangenwe nakho komsebenzisi okuhlukile. Ungathenga futhi i-carnitine ne-Cialis kumthengisi ofanayo, phakathi kwezinye izithako. Imikhiqizo ye-Propionyl-l-carnitine iyahluka ukusuka endaweni eyodwa kuya kwenye, kepha kusengezelela okufanayo. Qinisekisa nodokotela wakho ngaphambi kokwenza i-oda.
Stasi, MA, Scioli, MG, Arcuri, G., Mattera, GG, Lombardo, K., Marcellini, M.,… & Borsini, F. (2010). I-Propionyl-l-carnitine ithuthukisa ukubuyiswa kokugeleza kwegazi kwe-postischemic kanye ne-arteriogenesis revascularization futhi inciphisa ukukhiqizwa kwe-endothelial NADPH-oxidase 4-mediated superoxide. I-Arteriossteosis, i-thrombosis, kanye ne-vascular biology, 30(3), i-426-435.
UGianfrilli, D., Lauretta, R., Di Dato, C., Graziadio, C., Pozza, C., De Larichaudy, J.,… & Lenzi, A. (2012). I-Propionyl ‐ l-carnitine, l-arginine ne-niacin kwezokwelapha: indlela ye-nutraceutical yokungasebenzi kahle kwe-erectile. I-Andrologia, 44, I-600-604.
Flayyih, NK (2015). Umphumela we-L-carnitine ophathwe kumagundane abakhulelwe ekusebenzeni kokuzala kwezidumbu zabesifazane. Ijenali YeWassit Yesayensi Nemithi, 8(1), i-97-104.
1.Yini iGlycine Propionyl-L-Carnitine (GPLC)
I-2.Glycine Propionyl-L-Carnitine vs. L-Carnitine
Imiphumela ye-3.Glycine Propionyl-L-Carnitine
Ucwaningo Nemiphumela ye-Glycine Propionyl-L-Carnitine
5.Yikuphi Ukudla Okunothile KuGlycine Propionyl-L-Carnitine?
6.Ungayithatha kanjani iGlycine Propionyl-L-Carnitine
7.Glycine Propionyl-L-Carnitine Imiphumela emibi nokuphepha
8. Ukusebenzisana kwe-GPLC neminye imithi
Lapho ungathenga khona isithasiselo sePropionyl-L-Carnitine
Ngabe iPalmitoylethanolamide (PEA) Ingabe Unezinzuzo Zokulahlekelwa Isisindo?